Home Wararka Ciyaaraha Maanta Manchester City oo ka fiirsaneysa inay lacag badan ku dalbato Romelu Lukaku
Manchester City ayaa lagu soo waramayaa inay xagaagan u dhaqaaqdo Weeraryahanka Romelu Lukaku ee kooxda inter milan .
Citizens ayaa la filayaa inay suuqa ka raadiso weeraryahan cusub dhamaadka xilli ciyaareedka 2020-21, iyadoo gooldhaliyaha ugu sareeya taariikhda kooxda Sergio Aguero ay macquul tahay inuu kaga tago qaab bilaash ah.
Sida laga soo xigtay The Telegraph , City ayaa diyaar u ah inay 200 milyan oo ginni ku qarash gareyso suuqa kala iibsiga xagaaga si ay u horumariso kooxdooda, waxaana Lukaku loo aqoonsaday inuu bartilmaameed u noqon karo kooxda.
27 jirkaan ayaa dhaliyay 42 gool 96 kulan oo uu u saftay Manchester United intii u dhaxeysay 2017 iyo 2019 ka hor inta uusan ku biirin Inter, halkaasoo uu ku jiray qaab ciyaareed aad u fiican.
Xiddiga reer Belguim ayaa shabaqa soo taabtay 51 jeer 73 kulan oo uu u saftay kooxda reer Talyaani, oo ay ku jiraan 17 gool 22 kulan oo uu saftay tartamada oo dhan intii lagu jiray ololihii 2020-21.
City ayaa lagu soo waramayaa inaysan diyaar u aheyn inay qandaraas cusub u gacan geliso Aguero ilaa iyo inta uu xiddiga reer Argentine, kaasoo kabanayo dhibaatada dhaawacyada intii lagu jiray xilli ciyaareedkaan, isla markana uu cadeeyo taam ahaanshihiisa.
Previous articleLautaro Martinez oo ku dhow inuu heshiis cusub u saxiixo Inter Milan?
Next articlejuventus oo lagu soo waramayo inay xagaagan u dhaqaaqeyso saxiixa Paul Pogba xagaagan.